ယူနိုကျတကျက အရမျးအောငျမွငျခဲ့တဲ့အသငျးဖွဈလို့ လူတှကေ မနာလိုပွီး ဝဖေနျနကွေတာလို့ ပွောဆိုလိုကျတဲ့ မကျဂှဲရား – Myan Ball
ယူနိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဂှဲရားက တဈခြိနျက အသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကွေောငျ့ ယခုလို ဝဖေနျခံနရေတာလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ (၄) ရကျအတှငျး (၂) ပှဲရှုံးပွီးနောကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားအပျေါ ဝဖေနျမှုတှေ အမြားကွီး ကရြောကျနပေမေယျ့ မနညေ့က အဲဗာတနျအသငျးကို (၃-၁) နဲ့ အနိုငျရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနိုငျပှဲကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ ၁၉၈၉-၉၀ နောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး ရာသီမှုကို ရှောငျရှားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ လိဂျပှဲ (၇) ပှဲကစားပွီး(၃) ပှဲသာ အနိုငျရထားလို့ အမှတျပေးဇယား အောကျဆုံးနားမှာပဲ ရပျတညျနိုငျထားပါတယျ။
“ဒီအသငျးမှာ ကြှနျတျော ရောကျနတော (၁) နှဈခှဲရှိနပွေီဖွဈပွီး ကြှနျတျောသတိထားခဲ့မိတာက ကြှနျတျောတို့ဟာ ကမ်ဘာပျေါက လူပွောအမြားဆုံးခံနရေတဲ့ အသငျးဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ? ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ကလပျအသငျး ဖွဈလို့ပါ။ လူတှကေ ကြှနျတျောတို့ ကောငျးတာကို မလိုခငျြကွပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ ဟာ တဈခြိနျက အရမျးကို အောငျမွငျခဲ့လို့ပါ”လို့ မကျဂှဲရားက ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက်က အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်လို့ လူတွေက မနာလိုပြီး ဝေဖန်နေကြတာလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ မက်ဂွဲရား
ယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွဲရားက တစ်ချိန်က အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် ယခုလို ဝေဖန်ခံနေရတာလို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၄) ရက်အတွင်း (၂) ပွဲရှုံးပြီးနောက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ အများကြီး ကျရောက်နေပေမယ့် မနေ့ညက အဲဗာတန်အသင်းကို (၃-၁) နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ ၁၉၈၉-၉၀ နောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး ရာသီမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် လိဂ်ပွဲ (၇) ပွဲကစားပြီး(၃) ပွဲသာ အနိုင်ရထားလို့ အမှတ်ပေးဇယား အောက်ဆုံးနားမှာပဲ ရပ်တည်နိုင်ထားပါတယ်။
“ဒီအသင်းမှာ ကျွန်တော် ရောက်နေတာ (၁) နှစ်ခွဲရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်သတိထားခဲ့မိတာက ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူပြောအများဆုံးခံနေရတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကလပ်အသင်း ဖြစ်လို့ပါ။ လူတွေက ကျွန်တော်တို့ ကောင်းတာကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ တစ်ချိန်က အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့လို့ပါ”လို့ မက်ဂွဲရားက ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခြဲလျဆီးကစားသမားတှကေ ဒိုငျဗငျထိုးသူတှလေို့ စပါးနညျးပွမျောရငျဟို ဝဖေနျတာက သူ့ကို ဘာမှ မဖွဈစဘေူးလို့ ပွောသှားခဲ့တဲ့ နညျးပွလမျးပတျ